Xafiis lagu iibinayo baasaboorka DFKMG Soomaaliya oo laga furay Hargeysa – SBC
Xafiis lagu iibinayo baasaboorka DFKMG Soomaaliya oo laga furay Hargeysa
Xafiis la sheegay in lagu iibinayo baasaboorka dawlada FKMG Soomaaliya ayaa laga furay magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka la magac baxay Somaliland, kaasi oo labadii todobaad ee ugu dambeysay si caadi ah uga hawlgalayey magaalada Haregeysa.
Xafiiskaasi la sheegay in lagu iibinayo Baasaboorkii Casaa ee ay soo saartey xukuumadii Madaxweynaha uu ka ahaa C/llaahi Yuusuf, Ra’isalwasaarahana uu ka ahaa Cali Maxamed Geedi, waxaana jira warar sheegaya in ogolaanshaha xafiiskaasi ay bixisey wasaarada arimaha dibada Somaliland.
Mid ka mid ah wargeyska ka soo baxa magaalada Hargeysa oo saaka warbixintan qorey ayaa sheegay in xiriir ay la sameeyeen taliyaha laanta socdaalka Somaliland Maxamed Cismaan Caalin (Dayib), isla markaana wax laga waydiiyey wararka ku aadan in baasaboorka dawlada KMG lagu iibinayo magaalada Hargeysa oo waliba xafiis u furan yahay ayuu si carol eh arinkaasi u beeniyey waxaana uu sheegay in warkaasi uu ka arkay jaraa’idka oo qoraya.
Cismaan Haybe oo ka mid ah dadka magaalada Hargeysa ku dhaqan ayaa SBC u sheegay in xafiiska lagu iibinayo baasaboorka cusub ee dawlada KMG Soomaaliya uu yahay mid si caadi ah uga furan magaalada Hargeysa, isla markaana labadii asbuuc ee la soo dhaafay dadku ay fayl ugu jireen dalbashada baasaboorkaasi.
Arintan ayaa guux fara badani ka abuurtey magaalada Hargeysa, iyadoo dadka qaarkii gaar ahaan kuwa ay ku fogtahay mowqifka goosashada ay aad uga caroodeen talaabadaasi iyagoo ku tilmaamay in Hargeysa ay noqonayso magaalo ka mid ah Soomaaliya sida ay sheegeen, laakiin dadka dhiiga qabow ee midnimada aamisan ayaa ku tilmaamay talaabadan mid loo baahan yahay oo ah in baasaboorkaasi haba yaraatee meelaha qaar lagu safri karo maadama aanu haysan aqoonsi baasaboorka Somaliland.
Julaay 14, 2011 at 5:44 am
salaam kabacdi.soomaaliland markii horeba meel dheer ma jirin.Ayagayna dan u tahay in ay ka mid noqdaan soomaaliweeyn.Waayihii ay soomaaliya ka jiri jireen maamuladu somaliland ayagaa intaas wax la siin jirey oo loo qaadi jirey.Wali lama sheeegin wax nacfi (naruuro)ah oo laga keeno ardigooda.Ugu dambeyn reeruhu ma aha kuwo aad u shaqo badan saas darteed waa in ay meel ku tiirsan yahiin.Shaki kuma jiro in ay reeruhu yahiin kuwo an ku fiicnayn hawlkarnimada.
Julaay 14, 2011 at 6:15 am
in bassbor laga qaato hargaysa waa feker fiican waayo dadka dhib ayay ku qabeen u doonashada ugu sokoyn garowe ama bosaso .taasna shacabka dhib ayay ku qabeena .waayo dadka maanta ma haystaana bassbor kale oo ay danahooda ku soo qabsadaana marka ay wadanka bannaanka uga baxayaana .markaa ma ahana in dadka la cuno qabateeyana oo la dhahana maxaa loo qaadanayaana bassbor hebel leeyahayna .bassborka somali baa lehna dadkaana waa somali degana hargaysa ama gobolada waqooyina .